Domperidone Injection - တရုတ် Ningbo ဒုတိယအဟော်မုန်း
Domperidone Injection ကို【အင်္ဂလိပ်အမည်】: Domperidone Injection ကို【 Pinyin အတွက်အမည်】: Duopanlitong Zhusheye 【ဗိုလ်မှူးပါဝင်ပစ္စည်းများ】: Domperidone 【ဖျေါပွခကျြ】: ဒီထုတ်ကုန်အရောင်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းအရည်ဖြစ်ပါတယ်【ဘုံအမည်】 Domperidone Injection ကိုကုသရေး【ကုသရေးဆေးဝါးအမည်】၏စစ်ဆင်ရေးလက်စွဲစာအုပ် 【 Pharmacological လှုပ်ရှားမှု】: ဒါဟာတစ်ဦး dopamine အဲဒီ receptor ရန်ဖြစ်၏ Domperidone GTH နှင့်မျိုးဥထွက်၏ထုတ်သိမ်းထားသောငါးရဲ့ထံမှ dopamine ရပ်တန့်အပြင်အဖြစ် GT ကိုသွေးဆောင် LHRH-A2 နဲ့ sGnRH-တစ်ဦးကခိုင်ခံ့စေနိုင်ပါတယ် ...
၏စစ်ဆင်ရေးလက်စွဲစာအုပ် Domperidone Injection
【ဘုံအမည်】: Domperidone Injection
【အင်္ဂလိပ်အမည်】: Domperidone Injection
【 Pinyin အတွက်အမည်】: Duopanlitong Zhusheye
【 Pharmacological လှုပ်ရှားမှု】: ဒါဟာတစ်ဦး dopamine အဲဒီ receptor ရန်ဖြစ်၏ Domperidone GTH နှင့်မျိုးဥထွက်၏လွှတ်ပေးပြီးအဖြစ် LHRH-တစ်ဦးကအားကောင်းလာစေရန်ငါးရဲ့သိမ်းထားသောထံမှ dopamine ကိုရပ်တန့်နိုင်ပါတယ်2GTH လွှတ်ပေးပြီးမျိုးဥထွက်သွေးဆောင်ဖို့နဲ့ sGnRH-တစ်ဦး။
【များသည်】: ဒါဟာပူးတွဲ LHRH-တစ်ဦးနှင့်အတူသုံးနိုငျ2ငါးဘို့ empathema နှင့်မျိုးဥထွက်၏အတု induction များအတွက်
【အသုံးပြုမှုနှင့်သောက်သုံးသော】: ပထမဦးဆုံးရေအမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှ milliliter5~ 10mg domperidone ပါရှိသည်သည်အထိပုံမှန်ဆားတစ်ဦးသင့်လျော်သောငွေပမာဏနှင့်အတူဒီထုတ်ကုန်မှေးမှိန်။ ဒုတိယအချက်မှာ LHRH-တစ်ဦးကမွှေ2တစ် LHRH-တစ်ဦးရရှိရန်အချို့သောပုံမှန်ဆားနှင့်အတူဆေးထိုးဘို့25 ~ 20μg / ml တစ်အာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်အတူဖြေရှင်းချက်။ လိုအပ်သောသောက်သုံးသော Adjust နှင့်အထက်နှစ်ခုဖြေရှင်းချက်ရောမွှေပါ။ ထို့နောက် (dorsal တောင်၏အခြေစိုက်စခန်းအနီး) intraperitoneal ဆေးထိုး (pectoral တောင်၏အခြေစိုက်စခန်း) သို့မဟုတ်အသားဆေးထိုးဘို့အရောအနှောသက်ဆိုင်ပါသည်။ အောက်မှာဖေါ်ပြတဲ့အတိုင်းကီလိုဂရမ်လျှင်အမျိုးသမီးငါးများအတွက်သောက်သုံးသောဖြစ်ပါသည်:
ငါးကြင်း, crucian ငါးကြင်း မြက်ငါးကြင်း chub, bighead dace bream clarias fuscus loach megalobrama amblycephala Erythroculter ilishaeformis
LHRH-တစ်ဦးက23 ~ 5μg 5μg3~ 5μg5~ 10μg3~ 5μg 5μg 3μg 4μg 5μg
Black ကငါးကြင်းနှစ်ခုထိုးလိုအပ်ပါသည်။ ပထမဦးဆုံးဆေးထိုးများအတွက်သောက်သုံးသော: DOM 5mg + LHRH-တစ်ဦးက25μg; ဒုတိယဆေးထိုး DOM 5mg + LHRH-တစ်ဦးကတစ်ဦးသောက်သုံးသောနှင့်အတူ 24 ~ 48 နာရီအကြာပေးထား210μg။
အထီးမိဘငါးကိုသာအထက်အမျိုးသမီးမိဘငါးများအတွက်သောက်သုံးသော၏ 1/2 လိုအပ်ပါတယ်
【 Matters အာရုံစူးစိုက်မှုလိုအပ်】:
ဒီထုတ်ကုန်ကို အသုံးပြု. 1. မိဘငါးကစားရန်တားမြစ်ထားသည်
2. ဒါဟာ 20 ~ 30 ရက်℃တစ်ရေအပူချိန်မှာပိုကောင်းထိရောက်မှုသေချာနိုင်ပါတယ်။ ရေကိုအပူချိန် 20 ℃ထက်နိမ့်သည်မှန်လျှင်, spawn သော induction ၏ရလဒ်များကိုအနည်းငယ်ထိခိုက်နစ်နာကြလိမ့်မည်။
4. ကအသုံးမပြုခင်မူးယစ်ဆေးပြင်ဆင်ထားရန်ပိုကောင်းတယ်။ အဆိုပါပြင်ဆင်ထားမူးယစ်ဆေး 0.5-1 နာရီအတွင်းထိုးသွင်းရပါမည်။
【အထုပ်】: အထုပ်နှုန်း 10pcs
ယခင်: Injection သည်ဒြပ်ပေါင်းများက S-GnRHa (Ovuhom)
နောက်တစ်ခု: Injection ကိုငါးအသုံးပြုရန် LHRH-A2
ငါး Injection Ovaprim
ဟော်မုန်းသည်ငါး Ovaprim မွေးမြူ
ငါးခူသည် Ovaprim Injection ကိုငါးမွေးမြူရေးဟော်မုန်း
oxytocin Injection ကိုတိရိစ္ဆာန်ဟော်မုန်း
Ovaprim မွေးမြူငါးသည် spawn ဆေးပညာဟော်မုန်း
Ovaprim မွေးမြူငါးသည်ရောက်ရေချိုငါးလယ်တွေဟော်မုန်း, spawn Ovaprim ကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေ